Mpandraharaha mpanafatra entana: betsaka ireo entana mikatso, tara fety | NewsMada
Mpandraharaha mpanafatra entana: betsaka ireo entana mikatso, tara fety
Hisokatra amin’ny alakamisy izao etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ny hetsika La Grande Braderie de Madagascar (GBM) ary hifarana ny alatsinainy 24 desambra. Nanamarika ny tompon’andraikitra avy amin’ny orinasa Madavision, mpikaraka ny hetsika, Andrianasolo Hery, mpiandraikitra ny varotra sy serasera fa nisy fiantraikany tamin’ireo mpandray anjara mahazatra ny fahataran’ny sambo sy ny fahasarotan’ny famoahana entana eny amin’ny fadin-tseranana io.
Nihena ny mpandray anjara amin’ny hetsika La Grande Braderie de Madagascar. 230 ireo mpandraharaha mpandray anjara amin’ity andiany mamarana ny taona ity raha 400 mahery izany tamin’ny taon-dasa.
Anisan’ny nampitaraina ireo mpandraharaha mpanafatra entana avy any ivelany mandray anjara amin’ny hetsika La Grande Braderie de Madagascar ny fahataran’ny fahatongavan’ny sambo mitondra entana. Ankoatra izany, sarotra ary mandany fotoana ny famoahana entana eny amin’ny fadin-tseranana.
Vokany, mikatso ny entana, lasa lany andro na tara fety ny ankamaroan’izany. Entana tokony hamidy amin’izao ankatoky ny fety izao, tsy tafavoaka eny amin’ny fadin-tseranana. “Miteraka faty antoka ho anay mpandraharaha izany” hoy ireto mpandraharaha ireto.
Anisan’ny tena mahatsiaro maty antoka ireo mpivarotra lamaodin’ankanjo sy kiraro. Natao hiatrehana ny fety izy ireny kanefa izao tsy hita ho antenaina izao. Lafo anefa ny fandefasana entana amin’ny fiaramanidina ka tsy ho takatry ny fahefa-mividin’ny rehetra izany.